Madax ku xigeenka DDS oo booqasho ku tagey degmada Qabri bayax. - Hargeele - Wararka Somali State
September 26, 2019 116
Wafdi u hogaaminayo madax weyne ku xigeenka DDS, Aadan Faarax Ibraahim ayaa kulan la qaatay mas’uuliyiinta magaalada Qabri-bayax, socdaalkan madaxweyne ku xigeenka oo ah mid kormeer oo loogu kuur galayo mashaariicaha horunarineed ee ka socda magalada Qabribayax iyo xaaladaha nololeed ee dadweynaha ku nool degmadaas.
Socdaalkan ayaa qayb ka ah socdaaladii kormeerka ahaa ee uu wafdigu ku soo maray, maamul magaalooyinka, Dhagax-buur, Qabridahare iyo Godey.
Shirkii caadiga ahaa ee golaha fulinta deegaanka oo maanta furmey.
Wasiiru-dawlaha wasaarada caafimaadka ee JDFI oo gaadhay magaalada Aw bbare.